Milateriga Fransiiska oo soo bandhigay qalab casri ah oo dunida ka yaabiyay!!!! | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Milateriga Fransiiska oo soo bandhigay qalab casri ah oo dunida ka yaabiyay!!!!
Milateriga Fransiiska oo soo bandhigay qalab casri ah oo dunida ka yaabiyay!!!!
Qorigan ay soo bandhigeen ciidammada Fransiiska ayaa la sheegay in uu awood u leeyahay in lagaga hortago diyaaradaha Drones-ka
Milateriga Fransiiska ayaa sidoo kale lagu wadaa inay hirgeliyaan “koox khatar ah” oo ka tirsan shirkadda ka shaqeysa tiknoljiyadda iyo seyniska ee sci-fi, kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii looga fikiri lahaa khatarta mustaqbalka la wajihi doona.
Madaxweynaha Fransiiska, Emmanuel Macron oo markii la soo bandhigay qofka ku duulaya qalab sida diyaaradaha oo kale hawada galaya ayaa bartiisa Twiter-ka ku qoray “Aad ban ugu faraxsanahay ciidankeena iyo qaabka casriga ah ee ay wax u hindisaan”.
Yay yihiin ‘kooxda khatarta’?
Kooxdan ‘khatarta’ ah ayaa waxay ka kooban yihiin afar ilaa iyo shan qof oo ka tirsan shirkadda sci-fi, waxaana kooxdan laga dhowrsugayaa inay hindisaan, oo ay soo bandhigaan qalab milateri oo casri ah, kuwaas oo ka duwan kuwa caalamka yaala xiligan.
Kooxdan oo adeegsan doona farsamooyin kala duwan ayaa waxa kale oo ay ka fikiri doonaan sida kooxaha “argagixisada” ama dalalka dibadda ay u adeegsan karaan tiknolojiyadda casriga ah ee dhanka milateriga.
Waxaa kale oo jiray qorshe ah in ciidammada Fransiiska ee jooga dalka Mali loo geeyo robot (qalab la isku rakibay oo bani’aadamka loo ekeysiiyo, mashiinna ku shaqeeyo), kaas oo tijaabadiisa ay haatan socoto.